Ivon’ny fankalazana ny Jobily faha-150 taona – FJKM Ambavahadimitafo Ivon’ny fankalazana ny Jobily faha-150 taona |
Ivon’ny fankalazana ny Jobily faha-150 taona
Fankalazana.Jobily 150 taona
Ny Asabotsy 5 sy alahady 6 oktobra 2013 no ivon’ny fankalazana ny Jobily faha-150 taonan’ny fiangonana. Ka toy izao no programa amin’izany :
– Asabotsy 05 oktobra 2013 amin’ny 9 ora maraina : fotoam-pivavahana hiarahana amin’ny Foibe FJKM, Synodam-paritany, faritra Avaratr’Andohalo.
Ao aorian’ny fotoana dia hisy ny fametrahana ny vato fehizoro etsy amin’ny tokontany avaratry ny fiangonana; vato fehizoron’ny Tranom-bakoka sy
Raha manarina ny Akany Daniel Ralibera tokoa isika, dia tsy ampy, amin’ny maha-reny fiangonana antsika ny fanarenana izany ho tsangambato fotsiny, fa tsy maintsy manana vina isika ho amin’ny 50 taona manaraka (200 taona) ny mba hanana Tranom-bakoka sy Arsiva satria ny mpitandrina nitondra ity fiangonana ity dia mpampianatra tantaram-piangonana.
– Asabotsy 06 Oktobra 2013 amin’ny 9 ora maraina : fotoam-pivavahana hiombonan’ny kristianina rehetra avy eto amin’ny FJKM Ambavahadimitafo izay
tarihin’ny filohan’ny komitin’ny faha-150 taona, Ralibera Henri. Hamintina ny tantaran’ny fiangonana ny Vaomieran’ny tantara amin’izany fotoana izany.
Koa manentana antsika rehetra ho tonga maro hanatrika sy hanome voninahitra an’Andriamanitra noho ireo fotoana lehibe roa amin’ny fiainan’ny fiangonana ireo.
Ny hafatra ho antsika dia ny hafatry ny mpitandrina Rakotonirainy Johnson tao Andrianarivo, mpiara-miasa akaiky tamin’ny mpitandrina Ralibera Daniel :
« Hasondroty ho avo ny fiangonanao, hasoavy izy ary aza haratsiana, fa raha manao izany ianao dia manaratsy ny tenanao sy Jesoa Kristy izay efa nifidy anao,
noho izany, omeo voninahitra ny fiangonanao«